पोखरामा अवस्थित चमेरा गुफामा रहेका चमेराहरुको स्वाब परिक्षन गर्न वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. कोइरालाको माग • Health News Nepal
आज मिति : २०७९ असार १५
✍️डा. निरन्जन कोइराला (पोखरा)
सार्वजनिक सोचमा, कोरोना भाइरसको मूल कथा राम्रोसँग कोरिएको छ। 2019 को अन्तमा वुहानको समुद्री मासु बजारमा कोही जनावरबाट भाइरस संक्रमित भएको हो।
न्यूओर्कको चिडियाखानामा भाइरसले बाघलाई संक्रमित गरेको तथ्यले कसरी भाइरस प्रजातिका बीच घुम्न सक्छ भनेर देखाउँछ। चमेरा र मानिस बिचमा मध्यस्थ होस्टको रूपमा संका गरिएको जनावर प्यांगोलिन हो। इन्टरनेसनल युनियन फर कन्जर्भेसन अफ नेचरले उनीहरूलाई “संसारमा सबभन्दा बढी अवैध रूपमा व्यापार हुने स्तनपायी” भनेको छ र उनीहरूको मासु औषधीय गुणहरूको लागि पुरस्कृत गरिएको दाबी गरिएको छ। अन्वेषकहरूले पत्ता लगाए कि मध्यस्थकर्ता जनावरहरूमा कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित एन्टिबडीहरूको कुनै उपस्थिति थिएन ।जसले बजारमा जनावरहरू केवल मध्यस्थकर्ता मात्र रहेको सन्केत गर्दछ । धेरैले विश्वास गर्छन् कि चमेरा कोरोना भाइरसको प्राकृतिक भण्डार हुन सक्छ । चमेरा शिकारी वा वन्यजन्तु तस्करले भाइरसलाई मार्केटमा ल्याएको हुन सक्छ।
म जस्ता जैविक ईन्जिनियरहरूले भाइरसको जीनोमलाई हेरेर यसको सम्भावित उत्पत्ति जाँच गर्न सक्दछन् । अन्वेषकहरूले sequence data बाट चमेरा कोरोना भाइरस र SAR-CoV-2 बीचमा 96 प्रतिशत भन्दा बढी आनुवंशिक समानता फेला पारेका छन् । यस भाइरसको समग्र आणविक संरचना ज्ञात कोरोना भाइरस भन्दा भिन्न छ र यसको साटोमा चमेरा र प्यांगोलिनमा पाइने भाइरससँग मिल्दोजुल्दो छ। जसले यो भाइरस ल्याबमा ईन्जिनियर गरिएको छैन भनेर प्रमाणित गर्दछ ।
कोरोना भाइरस र अन्य भाइरस परिवारहरू मानव सभ्यताको परापुर्बक काल देखि चमेरासँग सह-विकसित भइरहेको छ, र अधिक लामो पनि हुन सक्छ। यो प्रक्रिया चमेरा बिरामी बिना नै हुन्छ-तिनीहरूको प्रतिरक्षा प्रणालीले (immune system) कोशिकाको क्षति (cell death) मर्मत गर्न र भाइरससँग लड्न अझ राम्रो तरिकाको रूपमा विकसित गरेको छ ।
चमेरा उडान गर्न सक्ने एकमात्र स्तनपायी प्राणी (mammals) हुन् जसले तिनीहरूलाई विशाल समुदायमा एक समुदायबाट ठूलो संख्यामा कोरोना भाइरस फैलाउन सक्ने क्षमता राख्दछन् । SARS-CoV-2 zoonetic हो, जसको मतलब भाइरस जनावरहरूमा उत्पन्न भयो र मानिसमा उफ्रियो । हामी मानिससँग कुकुर, गाई वा ह्वेल भन्दा बढी चमेरा सम्बन्धित छ। तर चमेराहरू बढी पराई देखिन्छन्, जसले गर्दा उनीहरूसँग सम्बन्धित गर्न गाह्रो हुन्छ। तर वास्तवमा कोरोना भाइरस फैलिन हामी चमेराहरूसँग कसरि अन्तरक्रिया गर्ने तरिकामा निर्भर गर्दछ। जसले गर्दा यो महामारी खतरानाक मोडतर्फ डोर्याएको छ।
नेपालमा लगभग 55 वटा चमेरा प्रजातिहरू भेटिएका छन् ती मध्ये धेरै पोखरा चमेरा गुफामा (Bat cave) पाइन्छन् ।त्यस्तै पाल्पाको चमेरा गुफामा उनीहरूका थुप्रै प्रजातिहरू छन् । पोखरामा यो उच्च जोखिमको समयमा हजारौं चमेराहरू रहेको हुँदा गण्डकी प्रदेश राज्यले यी चमेरा प्रजातिहरूमा कोरोना भाइरसको परीक्षणमा ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरि देखिन्छ।
सजक रहौ। सुरक्षित रहौ।
अमेरिकामा हावाहुरीका कारण ३० जनाको मृत्यु